Displaying items by tag: The Interview
၂၀၁၄ အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေး
အိုဘားမား ၂၀၁၄ ရန်ကုန်ခရီးစဉ်
Women's Forum Myanmar Asean 14
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ
အမျိုးသားပညာ​ရေးဥပ​ဒေကို သပိတ်​​မှောက်​သည့်​ ​ကျောင်းသားသပိတ်​
Hyper Sports TV
Mizzima TV Weekly Business
Friday, 16 January 2015 00:07
The Interview အခွေကို အခွေရောင်းဆိုင်များမရောင်းရဲ
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်အကြောင်း ရိုက်ကူးထားသည့် The Interview ရုပ်ရှင်ကားကို အခွေဆိုင်ပေါ်တွင် မရောင်းချရဲ ဟု အခွေဆိုင်အချို့က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
Published in ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း
အမေရိကန်၏ ဒဏ်ခတ်မှုအသစ်က ရန်လိုမုန်းထား မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ဟု မြောက်ကိုရီးယားပြော
ပြုံးယမ်း ။ ။ ဆိုနီဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုသစ်များ ချမှတ်လိုက်ခြင်းသည် အခြေအမြစ်မရှိသလို အမေရိကန်၏ ရန်လိုသည့် မူဝါ ဒတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်သည်ဟု မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ပြောကြားသည်။
Published in ကမ္ဘာ့သတင်း
Thursday, 01 January 2015 18:14
The Interview ဇာတ်ကား မြောက်ကိုရီး ယားနိုင်ငံအတွင်းသို့သွင်း ရန်တောင်ကိုရီးယား စီစဉ်
ဆိုးလ်၊ ဇန်နဝါရီ။ ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ တက်ကြွလှုပ်ရှား သူများသည်မြောက် ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခံရ သည့်အကြောင်း ရိုက်ကူး ထားသည့် The Interview ဇာတ်ကားကို မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားများ ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုခွင့် ရရှိရန် ယင်းဇာတ်ကား ဒီဗီဒီချပ်များ ကိုမြောက်ကိုရီး ယားနိုင်ငံအတွင်းသို့ တင်သွင်းရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
Published in ဖျော်ဖြေရေးသတင်း
Friday, 26 December 2014 18:15
ချစ်သူနှင့် ပြန်ပေါင်း ထုတ်ပြီလား ခရစ်ဘရောင်း
အဆိုတော်ခရစ်ဘရောင်းတစ်ယောက်ပြီး ခဲ့ သည့်လတွင်မှ ချစ်သူနှင့် လမ်းခွဲပြတ် စဲခဲ့ပြီ ဟုကြေ ညာပြော ဆို ခဲ့သော်လည်း ယခု ရက်ပိုင်း အတွင်း အဆိုတော်ကို ပြတ်စဲ ခဲ့ပြီ ဟု ကြေငြာ ထားသည့် ၄င်း၏ ချစ်သူကယ် ရူချီထရန် နှင့်အတူ အများ မြင်ကွင်း တွင်တွဲသွားတွဲလာလုပ်နေသည်ကို မြင်တွေ့ရသဖြင့် ၄င်းတို့နှစ် ဦးပြန်ပေါင်း ထုပ်နေ ပြီလားဟု မေးခွန်းများပေါ်ထွက် နေသည်။ ၄င်းတို့ကို လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် မြို့ရှိကလပ် တစ်ခုအတွင်း မှ အတူတွဲ ထွက်လာ သည်ကို မီဒီယာ များက အမိအရ မှတ်တမ်းတင်နိုင် ခဲ့ကြပြီး ၄င်းတို့ နှစ်ဦး သည်ကား တစ်ယောက် တစ်စီးစီဖြင့် ထွက်ခွါသွားခဲ့သည်။
Thursday, 18 December 2014 17:08
ဆိုနီ၏ အချက်အလက်များ ခိုးယူခံရမှု နောက်ကွယ်တွင် မြောက်ကိုရီးယားတို့ ကြိုးကိုင်ခဲ့ဟုဆို
နယူးယောက်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈။ အမေရိကန် နိုင်ငံရှိ ဆိုနီ ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ၏ ကွန်ပြူတာများ အတွင်းသို့ ထိုးဖောက် ၀င်ရောက်ကာ အချက် အလက် များ ခိုးယူမှု၏ နောက်ကွယ်တွင် မြောက်ကိုရီးယား အာဏာ ပိုင်များ ရှိနေကြောင်း အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူ များက ပြောသည်။ အမေရိကန် တို့က ယင်းတိုက် ခိုက်မှုကို မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရက စေခိုင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Wednesday, 17 December 2014 18:26
ခြိမ်းခြောက်မှု များကြောင့် ကင်ဂျုံအွန်းကို လုပ်ကြံသည့် အကြောင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ‘The Interview’ ဇာတ်ကားကို အမေရိကန် ရုပ်ရှင်ရုံများ၌ ရုံမတင်ရဲ
နယူးယော့ခ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၇။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ရုံ လုပ်ငန်းစု တစ်ခုဖြစ်သည့် Carmike Cinemas သည် မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်းကို လုပ်ကြံသည့် အကြောင်း ရိုက်ကူထားသည့် ‘The Interview’ ရုပ်ရှင်ကို ရုံမတင်ရန် ဆုံးဖြတ် လိုက်သည်။
ယနေ့ နိုင်ငံခြား ငွေလဲလှယ်နှုန်း
Yoma Bank Limited
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.
Currency Ref;Rate We Buy We Sell
USD 1105 1105 1113
EUR 1255.1 1255 1264
SGD 826.88 826 832
Office Address: Room Numbers 001, 003, 101 and 103, Lakekan Condo Tower, Upper Pazundaung Road, Ward 7, Pazundaung Township, Yangon, MYANMAR.
Phone: 01 295 398 or 09 421 010 101
Websites: www.mizzima.com, www.mizzimaburmese.com, www.mizzima.tv, www.mizzimaphoto.com, www.mzineplus.com, sports.mizzima.com